एमाले सांसद अनेरास्ववियु की अध्यक्ष नविना लामाले सुरु गरिन बैबाहिक जिबन,को हुन उनका श्रीमान ? » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एमाले सांसद अनेरास्ववियु की अध्यक्ष नविना लामाले सुरु गरिन बैबाहिक जिबन,को हुन उनका श्रीमान ?
बिहीबार, बैशाख १३, २०७५ १४:२२ मा प्रकाशित !
काठमाडौं । अनेरास्ववियु की अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले की सांसद नविना लामा आज (विहिबार) वैवाहिक बन्धनमा बाधिए कि छिन् । अनेरास्ववियुका पूर्व केन्द्रीय सदस्य प्रविन श्रेष्ठ र नविना लामाले आफ्नो १२ वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई बैवाहिक जीवनमा आज बदलेका छन् ।
लामाको विवाहको लागि कार्यक्रम तथा सम्पूर्ण व्यवस्थापन अनेरास्ववियुले गरेको छ । लामाको बिबाहमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को उपस्थित आज लामा र श्रेष्ठ बैबाहिक जिबन सुरु भएको छ ।
यस्तो थियो प्रेम उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध
कलाकारिता समेत गरेकी नविनाको प्रेम कहानी निक्कै रोचक छ । २०५६ सालमा एसएलसी पास गरेर काभ्रेको मादन कुँडारीबाट राजधानी आएकी उनी काठमाडौंमा अभिनय तिर पनि लागेकी थिईन । तर उनले भविष्य अन्योल देखेर होला राजनीति तिर लागिन् ।
उनले तामाङ भाषा तथा संस्कृतिमा आधारित ‘म्हेन्दोला माया’पछि नेपाली चलचित्रमा समेत गेरेकी छिन् । २०५८ सालमा बानेश्वर क्याम्पसमा स्ववियु सभापतिमा हारेपछि उनको राजनीतिक यात्राले गति लिएको थियो ।
उनले आफु प्रेम सम्बन्धमा रहेको पनि लुकाइनन् । मादनकुँडारी स्थित महेन्द्र माविमा अध्ययनरत हुँदै प्रारम्भिक कमिटी मार्फत अखिलमा संगठित भएकी उनी अनेरास्ववियुको २२औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भइन् ।
नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उनी अध्यक्षका रूपमा एक कार्यकाल मात्रै रहने सोचमा थिइन्, भाग्यवस् प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा समानुपातिकमा परिन् ।
त्यस्तै प्रविण श्रेष्ठ पनि अनेरास्ववियुका पूर्व केन्द्रिय सदस्य हुन।
PREVIOUS POST Previous post: जेठ मसान्त सम्म माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न छुट ,जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निकाल्यो सूचना,
NEXT POST Next post: गृह मन्त्रालयले गर्यो ६० जना प्रजिअको सरुवा,को को परे पढनुहोस पुरा (सुची सहित )
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, बैशाख १३, २०७५ १४:२२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, बैशाख १३, २०७५ १४:२२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, बैशाख १३, २०७५ १४:२२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, बैशाख १३, २०७५ १४:२२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, बैशाख १३, २०७५ १४:२२